uphicotho lweencwadi / usd Archives - Iphepha 2 le-5
I-AUDUSD ichaphazeleka ngokuqhubekayo kwi-COVID kunye neChina ukungaqiniseki
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Agasti 19
I-AUDUSD yehle ngaphantsi kwemimandla eyi-0.7200 kwaye igcina urhwebo olunikezelwayo olunqabileyo ngaphezulu kwe-0.7100s, elona nqanaba lisezantsi ukusukela ekuqaleni kukaNovemba. Ubuthathaka besibini buyaqhubeka njengoko idola yaseMelika yomeleza kwaye I-coronavirus yase-Australia Imicimbi ibangele omnye umjikelo we-GDP uqikelelo lokwehla.
Amanqanaba okumelana: 0.7389, 0.7289, 0.7189
Kwangoko evekini, i-AUDUSD yaqhekeza umgca wokuhamba odibanisa i-Nov 2020 kunye ne-Jul 2021 ephantsi, ebonisa imeko esezantsi. Ukophuka okungalunganga komgca wokunyuka okwenyukayo kubonisa ukuqala kwakhona kwentengiso ukusuka ngoFebruwari 2021 ephezulu ye0.8000. Ngaphaya koko, i-MA 5 yokuwela i-MA 13 inyusa indawo ye-RSI engaphantsi kwe-30.
Ukwehla okungaphantsi kwe-30 okanye i-RSI yeentsuku ezili-14 ibonelela ngokuthe kratya kwikhefu elisezantsi. Urhwebo oluzinzileyo ngaphezulu kwe-0.7150 luya kuqinisa uvakalelo kunye nomqondiso wokuba i-rally iphelile. Ugxininiso luya kubuyela emva ekubuyiseleni indawo ye-0.7300. Ngaphandle koko, ukwehla kwe-AUDUSD kunokukhawulezisa ukuya kwi-0.7000 esezantsi esezantsi.
I-AUDUSD ngoku yehlile yaya kwi-0.7144, kwaye i-intraday bias isekucaleni. Ukulahla kwakutshanje kucingelwa ukuba kukulungiswa okupheleleyo kokukhula ukusuka kumgangatho ophantsi ukuya kwi-0.8000. Ngenxa yoko, i-AUDUSD kulindeleke ukuba ivavanye amanqanaba asezantsi enkxaso ethe tyaba, ngoku ejikeleze inqanaba le-0.7000.
Ukwehla okukhulu kunokuqatshelwa phantsi kwamanqanaba e-0.7150, ekubuyiselweni kwakhona. Kwicala elingaphezulu, ukwaphulwa kwenkxaso ye-0.7220 yokuguqula inqanaba lokumelana kufuneka ibonakalise ukuphela kokuhla. Nantoni na eyenye, nokuba kuchacha, uvakalelo lwexesha elikufutshane luya kuhlala lubuhlungu.
I-AUDUSD ihlala phantsi kwe-Sub 0.7400 njengoko iMarike ilindela idatha ye-US
Ukuhlaziywa: 12 Agasti 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Agasti 12
Emva kokuchacha okuncinci ngaphakathi kommandla osondeleyo kusuku olungaphambili, i-AUDUSD ngoku ithengisa ngokujikeleza iphantsi kufutshane nenqanaba le-0.7400. NgoLwesine, esi sibini siyawa njengoko sisilele ukugcina iseshoni yangaphambili inyuka phezulu. Abarhwebi ngoku balinde e-US Amabango okuqala angenamsebenzi kunye nesalathiso samaxabiso abavelisi (PPI) ukubonelela ngesantya sokurhweba esitsha.
Amanqanaba okumelana: 0.7557, 0.7476, 0.7389
Amanqanaba enkxaso: 0.7289, 0.7220, 0.7150
Kwiveki yesithathu ngokulandelelana, i-AUDUSD ibithengisa ngokuthe ngcembe ngaphakathi kwebhendi ye-0.7289-0.7426, kwisiseko sokuhla kwexesha elikufutshane, kunye nokunyuka okuncinci ngaphezulu komndilili wokuhamba (MA 5 kunye ne-13). Ixabiso lixhaswa kwi-0.7300 lows kwitshathi yemihla ngemihla, kwaye ithengisa kuluhlu olusecaleni. Inqanaba le-0.7426 limisela indawo enzima.
Emva kokoyisa oku, i-AUDUSD inokuthintelwa kwangaphambili ukuya kwinqanaba eliphezulu le-0.7450 ngaphambi kokuzama ukuphakama kwe-6 kaJulayi ye-0.7600 kunye nomqobo oselumelwaneni othe tyaba we-0.7616. I-bounce ye-bullish kwisibini isafuna idatha engaphezulu ukuba iqinisekiswe. Oko kukuthi, kunokuba sisilungiso ngaphakathi kwendlela ephezulu yexesha elide.
I-AUDUSD ngoku ithengisa kuluhlu emva kokubamba inqanaba lenkxaso elincinci le-0.7289. Ukuqala, i-intraday bias ayitshintshi. Ukuqhekeka kwinqanaba le-0.7389 lokuchasana, ukubuyiswa kwinqanaba le-0.7289 kunokuqhubeka ngaphezulu. Oku kuya kuphawula ukuphela kokulungiswa kwenqanaba le-0.7600.
Ukuqhubela phambili koku kule meko kungakhokelela ekubuyiseleni ukuphakama kwe-0.7600. Ukwaphulwa ngokuqinileyo kwenqanaba le-0.7300, kwelinye icala, kunokucebisa ukuphinda kulungiswe kwinqanaba le-0.7600. Ngaphantsi kwe-0.7300, utyekelo lwe-intraday luya kutshintshela kwicala elingaphantsi, ngenkxaso yexesha elifutshane kwi-0.7250.